HomeAfaan OromooQeerroo fi Jaarsoliin Dodolaa Leencoo Baatiitti Akeekkachisa Cimaa Ergan!
“Arsiin gowwaadha diina isaa ni ajjeesaa nutti hin dhufin.”Qeerroo Dodolaa
Ayyalee Baatii filannoof PP bakka bu’uun Arsii, Dodolaa irratti akka kaadhimamaa tahee rammadame ofuma isaa kaleessa galgala namootatti odeeffataa ture. Leencoo Ayyalee Baatii lammummaa Amerikaa qaba. Garuu PP waan taheef namni lammii biyya alaa taatee hin dorgomtu jedhuun hin jiru.
-Boordiin filannoo Eezmaa dha
-Taajjabdooni Eezemaa dha
-Mootummaan Eezemaa dha waan taheef, kanarraa wanti eegamu hin jiru jechuun qeequ kanneen keessa beekan.
Gama biraatiin, dubbii kana shakkiin eegaa kan jìran Qeerroo fi Jaarsoliin biyyaa “ABO diigaa turte, Jawaariin hiisistee jirta, Abiyyi Ahimad wajjiin Arsiin gowwaadha jettee nuun arrabsiiste, kanaaf akka nutti hin dhufne” jedhanii nama itti ergaa akkka jirantu beekame .
Namni kun jibba baayyee hamaa jaarmaayalee Oromoo kan qabuu fi waggoota lamaan darban kanas dhaabbilee Oromoo diiguu irratti bobba’ee kan ture tahuun ni beekama.
Lola Tigraay fi Baqannaa Koree Tigraay keessatti lolli jabaatee itti fufeera. Akka maddeen mootummaa Itoophiyaa keessa jiran irraa dhaga’amaa jirutti, guyyoota 10 keessaatti qofa lola guddaa 23tu taasifame. Lola kana keessattis loltoonni kumaatamaan lakkaa’aman gara xoophiyaa dhumuu fi booji’amuun himamee jira. Gama biraatin, Bulchiinsi Koree Yeroo Tigraay Dr Muluu Naggaatin hogganamu magaalota keessatti sadarkaa sochii gochuu dadhabuu irra gahuu isaa miseensonni Koree kanaa himaatii jiran. Guyyoota muraasaa asitti waraanni qarqara magaala Maqaleetti taasifamaa jiru yaaddoo guddaa uumeras jedhameera . Sababaa kanaaf, Dr Muluu Naggaa dabalatee miseensonni Koree kanaa muraasni Maqalee Hoteela Pilaanet tahaa turan yeroo ammaa teessoo isaanii gara Finfinneetti jijjiirutu beekame. Kalaeessa TMH irratti miseensi KHR TPLF “lola tibbanaa kanaan injifannoo guddaa arganneerra” kan jedhe Getaachoo Raddaa gama mootummaa Itoophiyaa irraa hanga ammaa ibsi dhagaa’ame hin jiru.